Global Voices teny Malagasy » Na Eo Aza Ny Fandrahonana, Miady Hisian’ny Lalàna Tsy Miangatra Momba Ny Angovo Ireo Makedoniana Mafàna Fo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Novambra 2012 2:42 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Makedonia, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna, Zon'olombelona
Ireo mpikambana avy eny ifotony ao amin'ilay fandraisana andraikitra sivily AMAN, izay nangataka ny mba hisian'ny fandrindràna tsy mitanila ny resaka angovo sy fampitsaharana ny fampakàrana ny sandan'ny asam-panjakana ao Masedonia, dia niatrika endrika teritery samihafa, nahitàna hatramin'ny fandrahonana tsy mitsaha-mitombo.
Amin'ny fiteny any an-toerana, ny hoe “aman” dia midika ‘kiakiaka’ na ‘talaho iray’ ary ny mitovy aminy dia ny “miangavy, atsaharo.” Ity hetsika avy eny ifotony manohitra ny fiakaran'ny sandan'ny asam-panjakana ateraky ny ampihi-mamba (herinaratra, solika , foibe fanafanàna) ity dia nanomboka ny hetsi-panoherany isan-kerinandro tamin'ny Aogositra . Koa satria ny fiakaram-bidy dia miteraka fiakaran'ny vidin-tsakafo , miantraika voalohany indrindra amin'ireo olona marefo , dia nihanaka ireo hetsi-panoherana avy any Skopje sy Bitola  nankany aminà tanàna maro hafa  – Tetovo, Shtip, Prilep, ary Kumanovo.
Hetsi-panoherana AMAN tao Bitola. Sary avy amin'ny bilaogy Energetska efikasnost  (Fahombiazan'ny Angovo) , fampiasàna nahazoana alàlana.
Tany am-piandohana, ireo manampahefana, izay ahitàna ny Kaomisiona Mpandrindra ny Angovo , ny fampahalalam-baovao mahazatra ary ireo sendika , dia ninia tsy nijery ilay hetsika. Mba hamaliana ampahany an'ity olana ity, nampitomboin'ny AMAN ny fanentanana tanaty media sosialy (tenifototra: #АМАН ) ary nanaovany hetsi-panoherna iray teo anoloan'ny Sampan-draharaham-Pahitalavi-Panjakana, MTV [mk , sq ].
Rehefa tsy nahomby ilay tsy firaharahiana an-kitsirano nataon'ireo manampahefana, ireo mpandray anjara tamin'ny AMAN no nampiharana endrika teritery isan-karazany : fanatsofohana olona mody hoe mpomba nefa mpanakorontana, fijirihana sy fanakatonana miverimberina amin'ny fomba misitery mahazo ny kaonty Facebook-n'ny hetsik'izy ireo, fandrahonana ataon'ireo mpandalo  [mk], ny fitsaratsaram-poana avy amin'ny PM (izay niantraika tamin'ny fandraisana anjaran'ireo olona izay ny governemanta no mandoa ny karamany), ny hetsika setriny avy amin'ireo  GONGO , fanelezana fanalàm-baraka .
One World SEE nitatitra hoe :
Hatrany am-panombohan'ny hetsi-panoherana, tsy nitsahatra niampanga hatrany azy ireo hatrany ho voatarika sy niasa teo ambany toromarik'ireo mpitantana antoko mpanohitra, ny Social-Democratic Union of Macedonia (SDSM ) ny governemanta.
Vao niandoha ny herinandron'ny 25 Septambra 2012, ny Kaomity Miaro ny Zon'Olombelona ao Helsinki  any Makedonia dia niampanga ny Kaomisiona Mpandrindra ny Angovo fa hoe ny fanapahan-kevitr'ity farany hanafoana ny sanda mora ho an'ny herinaratra ampiasaina isanandro ary ny fanapahan-kevitra hamela ny fisondrotam-bidin'ny herinaratra ary ny elanelana misy amin'ny fanafànana dia nolaniana niainga avy amin'ny fepetra izay tsy hita, raha ny marina, ao anatin'ny Lalana momba ny Angovo.
Tamin'ny tafatafa ho an'ny mpanao gazety ny andron'ny 30 Okt, nampahafantatra ny be sy n y maro ireo solontenan'ny AMAN[mk: 1 , 2 , 3 ; sq: 1 , 2 ] fa naharay fandrahonana azy sy ny fianakaviany ny iray amin'ireo mpikambana mikarakara ny hetsika, avy amin”olon-tsy fantatra”: nosakanan-dry zareo izy tao afovoan-tanànan'i Skopje, nezahany nampitenenina momba ireo mafàna fo hafa, tamin'ny fampisehoana azy ny sarin'izy ireny. Mivandravandra be, ny haftra dia ny hanatsaharana ny hetsi-panoherana ary ny fanangonan-tsonia misy amin'izao fotoana hanovàna ny Lalàna momba ny Angovo. Nangataka ny polisy sy andrim-panjakana hafa ireo mafàna fo mba hikaroka hainga sy hanafay ireo nanao izany, ary tamin'ny PM kosa mba tsy hanelingelina ny fizotry ny asa fanaovàn-dalàna.
Mitohy,  na izany aza, ny hetsi-panoherana. Mampiasa fantsona amin'ireo andrim-panjakana sy nametraka tetikasa iray hanovàna ny Lalàna momba ny Angovo. Iandrasàna ny fankatoavan'ny governemanta, avy eo dia mila manangona sonia 10.000 ry zareo mba hahafahana manolotra ilay volavolam-panitsiana eny amin'ny Parlemanta.
Mitohy ihany koa ny tsindry atao amin'ireo mafàna fo. Raha mbola miriaria any ireo izay nanatanteraka ny fampitahorana voalaza etoana, nisy tranga hafa vaovao nitranga nandritra ny hetsi-panoherana faha-12 natao ny 3 Nov. Notaterin'ny  Radio MOF [mk] fa nisy andiany iray tamin'ireo mpanao hetsi-panoherana ho fanoherana ny an'ny AMAN, nandrahona sy niezaka nandroaka ireo mpanao fihetsehana avy amin'ny AMAN, saingy nosakanan'ny polisy ny mety ho fihoaram-pefy.
Androany amin'ny mitatao vovonana dia nifamory araka ny efa fanao mahazatra anay teo anoloan'ny Kaomisiona Mpandrindra ny Angovo izahay. Saingy tsy irery izahay tamin'izany. Tonga tampoka avy any ry zareo. Najanon-dry zareo teo an-tsisin-dàlana [akaiky teo] ny jeep iray nentiny. Nivoaka tampoka ny jeep zareo niaraka tamin'izay fitaovany efa voaomany hanaovana hetsika hanoherana ny hetsikay. [Tokony ho 50 metatra teo ho eo] nisy 60 hafa tonga nanampy isa an-dry zareo. Nipoitra tampoka avy any koa ireo andiam-pàka sary avy amin'ny Kanal 5, Sitel sy MTV. Naka sary an'ireo olona ireo ry zareo izay avy hatrany dia nametraka saron-tava maneho ny endrik'i Radmila Shekerinska [“fakan-tàhaka”  ikendrena ilay Solombavambahoaka avy amin'ny mpanohitra]. Tsy nisy afa-tsy 30 latsaka teo izahay. Nisy tovolahy iray nanatona anay, ary rehefa naontaniana ny momba azy, dia nilaza izy fa avy amin'ny Fiombonan'ny Herin'ny Tanora an'i [VMRO-DPMNE ]. Nobaikoany mba hiala teo izahay ao anatin'ny 20 minitra. Sady niteny ratsy ihany koa izy rehefa niverina namonjy ireo iray tarika taminy. T.F. Be manamboninahitry ny polisy teo ary dia nitazona tsara tokoa ny toerany ry zareo [teo anelanelan'ireo andiany roa ireo]. Ny mpifehy azy ireo dia nanome toky anay fa tonga hanakana izay mety ho herisetra ry zareo. Teo ihany koa ireo solontenan'ny [OSCE ].
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/11/08/40087/
 voalohany indrindra amin'ireo olona marefo: http://aktiv.org.mk/en/resources/sodrzini-aktiv/170-price-increases-cause-greater-anger-among-vulnerable-categories-of-citizens
 tanàna maro hafa: http://skopjediem.com/component/content/article/75-business-info/14943-aman-organises-protests-across-macedonia-.html
 Kaomisiona Mpandrindra ny Angovo: http://www.erc.org.mk/DefaultEn.asp
 ny hetsika setriny avy amin'ireo: http://aktiv.org.mk/en/resources/sodrzini-aktiv/177-politicians-should-stop-with-instrumentalization-of-citizens-movements
 nitatitra hoe: http://oneworldsee.org/content/protests-against-higher-prices-of-utilities-continue
 Kaomity Miaro ny Zon'Olombelona ao Helsinki: http://www.mhc.org.mk/